तान्का कसरी लेख्ने ? - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
कती पटक पढियो : 492
तान्का एक जापानी पाँच पङ्तीको कविता लेख्ने शैली हो । हाइकूमा ५-७-५ स्वरमा(syllables) लेखिये जस्तै तान्का ५-७-५-७-७ स्वरमा(syllables) लेखिन्छ । यसको ईतिहास लगभग १२०० बर्ष पुरानो रहेको बताईन्छ । यस जापानी शब्दको नेपाली अर्थ “छोटो गीत” भन्ने आउँछ । यो बिशेष गरेर प्रकृति, ॠतु, प्रेम, बेदना, अथवा यस्तै किसिमका कुनै गहिरो भावनालाई आधार बनाएर लेखिन्छ ।
यो हाईकू जस्तै सानो हुन्छ तर हाइकूमा भन्दा २ वटा बढी पङ्ती यसमा हुन्छ । यसमा हाइकू भन्दा बढी उपमा, अलंकार र साकार स्वरुप प्रयोग गरिन्छ ।
पहिलो पङ्ती – ५ स्वरको(syllables)
दोश्रो पङ्ती – ७ स्वरको
तेस्रो पङ्ती – ५ स्वरको
चौथो पङ्ती – ७ स्वरको
पाँचौ पङ्ती – ७ स्वरको
को हुन्छ ।
उदाहरणका लागि केही नेपाली तान्काहरु :
भिर पाखा बगायो
आयो बस्ती पुरियो
गुहार्नुनी कस्लाई ?
ओइलिन वाध्य छ !!
– लक्ष्मी चेम्जोङ
उर्लेको त्यो भेलले
रमायो खुशी लुटि
बोकी पापको भारी ।
सिमाको बाध नागी
सोच्दा पछुतो लाग्छ ।
रात भरी चलेर ।
यो लोभि मन
दोबाटोको यात्रि झै।
– स्टार हाङ बान्तवा “जलन” (झुत्रे जेठा)